Yaanu Nahay?Shenzhen Lantaisi Technology Co., Ltd.
Macaamiisha qaaliga ah!Ku faraxsanahay inaan halkan kugu kulmo!
Shenzhen LANTAISI Technology Co., Ltd, oo la aasaasay 2016, waxay ka kooban tahay koox farsamoyaqaanno iyo iib ah oo khibrad qani ah u leh dallacaadda wireless-ka ee taleefanka gacanta.Farsamooyinka, kuwaas oo leh 15 ~ 20 sano oo waayo-aragnimo ah oo ku saabsan maaraynta wax soo saarka, nidaamka isbeddelka tignoolajiyada iyo aqoonta ku jirta goobta dallacaadda wireless, waxay ka socdaan Foxconn, Huawei iyo shirkado kale oo caan ah.Waxaan diiradda saareynaa R & D, soo saarista qalabka dallacaadda wireless-ka ee taleefannada gacanta, dhagaha-dhegaha TWS iyo saacadaha tufaaxa, waxaanan bixinnaa xalal dallacaadda wireless-ka xirfadeed. Waxaan hadda nahay xubin WPC iyo xubin Apple ah.
Dhammaan alaabadayadu waxay dhaafeen shahaadooyinka CE, RoHS, FCC.Qaar baa haysta shahaadooyinka QI iyo MFI.
Dhammaan alaabooyinka waxaa lagu qaabeeyey moodallo naqshadeysan oo leh shatiyada muuqaalkeena.
Made In China ayaa noo ahaa madal B2B tan iyo 2020. Waxaan ka gudubnay Kormeerka Warshadaha by Made In Shiinaha.
Hadafkayagu waa inaan noqono fasalka koowaad "Saaraha caqliga leh" silsiladda korontada ee alaabada elegtarooniga ah ee mobilada, waxaan ku dadaalnaa inaan sahamno tignoolajiyada ugu horumarsan sanad walba.Waxaan u samayn karnaa OEM iyo ODM qoto dheer oo u adeega macaamiisheena qiimaha leh waxaana hubaal ah inaan u soo bandhigno qiimo badan la-hawlgalayaashayada.
Ka dib sanado badan oo horumar degdeg ah, ganacsigeenu wuxuu ku fiday suuqyo kala duwan oo caalami ah, sida dhul weynaha Shiinaha, Japan, Kuuriyada Koonfureed, Bariga Dhexe, Koonfur Bari Aasiya, Yurub, Mareykanka iyo gobolo kale.Waxaan kuu rajeyneynaa wadashaqeyn wanaagsan macaamiisha sharafta leh.